नारायणी अस्पतालको बन्द सिटिस्क्यान सेवा ७ वर्षपछि सूचारु
वीरगञ्ज, १३ चैत । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा करिब ७ वर्षदेखि बन्द रहेको सिटिस्क्यान सेवा आइतवारदेखि पुनः सुचारु भएको छ । जनशक्ति अभावका कारण बन्द रहेका सिटिस्क्यान पुनः सेवा सूचारु भएको हो ।
नारायणी अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट (मेसु) डा. बिरेन्द्र बहादुर प्रधानका अनुसार सिटि स्क्यान मेशिन सुचारुका लागि जनशक्तिको अभाव छ ।
यद्यपी ३ सिफ्टमा सञ्चालन गर्न ३ जना कर्मचारी आवश्यक भएपनि जनशक्तिको अभावमा एकै जना कर्मचारीको भरमा सेवा सुचारु भएको डा. प्रधानले बताए । अस्पतालमा ९ वटा सिटि स्क्यान मेशिन भएपनि ६ वटा मेशिन सुचारु अवस्थामा छन् । बिग्रिएका अन्य ३ वटा मेशिन पनि मर्मत कार्य भईरहेको डा. प्रधानको भनाई छ ।
प्राविधिक कामहरु केही बाँकी रहेको हुँदा अर्काे हप्तादेखि पुर्ण रुपमा सञ्चालन हुने अस्पतालका रेडियो टेक्नोलोजिस्ट प्रदीप साहले बताए । साहका अनुसार नारायणी अस्पतालमा ४० स्लाईस क्षमताको मेशिन जडान गरिएको छ । नेशनल मेडिकल कलेजमा १ सय ६० स्लाईस क्षमताको जडीत छ भने त्याँहापछिको बढी क्षमताको मेशिन नारायणीमा जडान गरिएको हो । अन्य ठाउँको भन्दा नारायणी अस्पतालमा २५ देखि ३० प्रतिशत कम शूल्कमा सिटि स्क्यान हुने रेडियो टेक्नोलोजिस्ट साहले जानकारी दिए ।
गरीब तथा विपन्न परिवारका व्यक्तिहरुलाई चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा सिटिस्क्यानमा २० प्रशितसम्म छुट दिन सकिने अस्पतालका निमित्त मेसु प्रधानले बताए । मधेश प्रदेशकै जेठो सरकारी अस्पतालमै सिटि स्क्यान सेवा सूचारु भएसँगै चर्काे शूल्क तिरेर निजि अस्पतालमा सिटिस्क्यान गराउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको डा. प्रधानको दावी छ ।
नयाँ सामान खरिद गर्दा पनि २÷३ महिनाभित्रै बिग्रिएर थन्क्याउनुपर्ने विगतका उदाहरणले स्पष्ट भएपनि अहिले पुनः ४ करोड ९१ लाख खर्चिएर जडित उपकरण कहिलेसम्म टिक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।